Ibhulogi - I-Winpal WP-Q3A iphrinta ephathekayo, ukuthambekela okusha kwehhovisi elihambayo
Top Umkhiqizi Mini Iphrinta Kusukela 2010
2 Inch / 58mm Uchungechunge
3 Inch / 80 mm Uchungechunge
Uchungechunge Lokudlulisa Okushisayo
I-Winpal WP-Q3A iphrinta ephathekayo, umkhuba omusha wehhovisi leselula
WPLB80 80mm Thermal Ilebula P ...
Iphrinta Yelebula le-WPB200 4-Inch
Iphrinta Yeselula ye-WP-Q3C 58mm
WP300A Thermal Dlulisa / Dir ...
Ngokuthuthuka kwezinga lesayensi nentuthuko esheshayo yomnotho wezenhlalo, abantu besimanje abasavinjelwa emahhovisi asendlini ahleliwe. Yonke imikhakha yempilo yabantu yansuku zonke, izindawo zokusebenza ezingaphandle nezingagciniwe ziqala ukusebenzisa imishini ehlobene kakhulu. Njengomunye wabo, amaphrinta amarisidi aphathekayo ayajwayeleka kubantu kancane kancane, futhi kwenza ihhovisi labantu lihle kakhulu.
1. Encane, elula futhi eqinile
Iphrinta ephathekayo, njengoba igama liphakamisa, kufanele kube lula ukuphatha nokusebenzisa. I-WP-Q3A inosayizi wohlaka ongu-124 * 108 * 61mm, ongalawulwa ngesandla esisodwa. Isisindo esingu-357g kulula ukusithwala, impilo yekhanda lokuphrinta ifinyelela ku-30Km, futhi ihlala isikhathi eside.
2. Isivinini sokuphrinta esisheshayo nempilo yebhethri ende
Ijubane lokuphrinta linquma ukusebenza kahle komsebenzi. Ngokuvamile, ukuphrinta esizeni kudinga isivinini esisheshayo ukonga isikhathi sokulinda sabasebenzi esifanele. Ngasikhathi sinye, ngenxa yokusebenza kwangaphandle, i-adaptha yangaphandle ayinakusetshenziselwa ukunikezwa kwamandla, ngakho-ke ibhethri elinamandla amakhulu nokuphrinta kwamandla aphansi kuyadingeka ukuhlangabezana nezidingo zokuphrinta okuqhubekayo. I-WP-Q3A ifakwe ibhethri elishajekayo le-lithium-ion elingu-2500mAh.
3. Kulula ukusebenza
Idizayini yokwakhiwa kwephepha okulula ukuyilayisha, izilungiselelo zomsebenzi eziyisisekelo zilula futhi zisebenza kalula, noma ngabe zifika noma cha, zingakuqonda ukusetshenziswa kwe-WP-Q3A okokuqala futhi ziqale ngokushesha.
4. Multi-interface, ukumisa ocebile
I-Winpal WP-Q3A ifakwe i-USB ne-Bluetooth interface, evumelana nokuxhumana kwangaphandle namadivayisi ahlukahlukene wokusebenza nokusetshenziswa. Ngasikhathi sinye, iphinde yathuthukisa umsebenzi wokuthola iphepha, ongaphuthelwa ama-oda, hhayi ama-oda amabi, futhi ongumsizi omuhle wehhovisi langaphandle.
Manje, ngaphansi kwenkambiso ejwayelekile yehhovisi elihlakaniphile elihambayo, amaphrinta wamarisidi aphathekayo asetshenziswa kakhulu, okulungele ukuwasebenzisa nokuwasebenzisa, okusheshayo nokusheshayo, futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kwehhovisi. Lokhu okungenhla ukwethulwa kwephrinta yeRisda Technology ephathekayo ye-WP-Q3A.
Isikhathi Iposi: Apr-26-2020
© Copyright - 2010-2020: GuangZhou Winprt Technology Co., Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Eshibhile Irisidi Iphrinta, Iphosta Yokuthola I-Pos, Iphrinta Yokuthola I-Thermal, Ucingo Irisidi Iphrinta, Iphrinta Yokuthola I-Thermal 80mm, Iphrinta Yokuthola i-Wifi,